चिसो छल्न रारा आइपुगे विदेशी चरा- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
मंसिर १४, २०७७ नवीन पोखरेल
लन्डन — बेलायतमा डिसेम्बर पहिलो साताभित्रै कोभिड खोप उपलब्ध हुने भएको छ । अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेका खोप ७ डिसेम्बरभित्र बेलायत आइपुग्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
एनएचएस इंग्ल्यान्डले बेलायतका अस्पतालहरूमा ७ देखि ९ डिसेम्बरभित्र खोप आइपुग्ने जनाउँदै तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन् । फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेका खोप मानिसलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन ९५ प्रतिशत प्रभावकारी भएको समाचार हालै मात्र प्रकाशित भएको थियो । तर, यसलाई भण्डारण गर्न एकदम न्यून तापक्रम (–७० डिग्री सेन्टिग्रेड) आवश्यक पर्ने बताइएकाले भण्डारण र ओसारपसारमा चुनौती रहेको स्वास्थ्यविद्हरूको धारणा छ ।
उक्त खोप स्वीकृतिका लागि सरकारले बेलायती नियामक निकाय मेडिसिन्स एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए)सँग आग्रह गरिसकेको छ । गत साता बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले बेलायतमा खोप उपलब्ध गराउन एमएचआरएलाई भनिसकेको बताएका थिए । यद्यपि उक्त निकायले कहिलेसम्म अनुमति दिन्छ निश्चित छैन । बेलायत सरकारले फाइजर र बायोएनटेकको ४ करोड डोज, अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको १० करोड र मोडेर्नाको ५० लाख डोज यसअघि नै ‘अर्डर’ गरिसकेको छ ।
१५ वर्षदेखि एनएचएसमा कार्यरत हाल क्रोयडन युनिभर्सिटी हस्पिटलका क्लिनिकल अडिट विभाग प्रमुख डा. सुरजमणि पौडेलले आफ्नो अस्पतालका प्रमुख कार्यकारीले खोप तयारीबारे इमेल गरेको जनाए । ‘यो हामी सबैका लागि खुसीको खबर हो । अस्पतालका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी क्रिसमस गिफ्टका रूपमा खोप पाइने भयो भनेर अत्यन्त उत्साहित छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘साथीहरूमा यो कति सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कौतूहल पनि देखिएको छ ।’
७२ वर्षको एनएचएस इतिहासमै ‘इमुनाइजेसन’ कार्यक्रम सबैभन्दा बृहत् हुन लागेको पौडेलले जनाए । साउथ वेस्ट लन्डनका चारमध्ये आफ्नो अस्पताल पनि खोप भण्डारण र वितरणका लागि चुनिएको जनाउँदै उनले सरकारको निर्देशिकाअनुसार जोखिममा रहेका र वृद्धवृद्धालाई वितरण गर्ने तयारी रहेको बताए ।
क्रोयडन नेपाली समाजका अध्यक्ष उनी यसबाट नेपाली समुदाय पनि लाभान्वित हुने आशा व्यक्त गर्छन् । पौडेलले महामारी सुरु भएपछि आफ्नो अस्पतालले करिब १३ सय कोभिड बिरामीलाई उपचार गरेको समेत जानकारी दिए ।
लन्डनस्थित क्विन एलिजाबेथ अस्पतालका वरिष्ठ व्यवस्थापक डा. बच्चुकैलास कैनीले पनि भ्याक्सिनसम्बन्धी काम गर्न निर्देशक र कर्मचारी नियुक्त भइसकेको बताए । भ्याक्सिन लगाउने ठाउँ, भ्याक्सिन लगाइदिने व्यक्ति, भ्याक्सिन गर्ने भण्डारण व्यवस्था आदिको समेत तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘यो समाचारले अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी मात्रै होइन, सबै बेलायतवासी हर्षित भएका छन्,’ उनले भने, ‘कोभिडविरुद्धको यो एकदम ठूलो सफलता र कदम हो ।’ बेलायतको बर्नमाउथ विश्वविद्यालयमा आबद्ध जनस्वास्थ्यविद् डा. निर्मल अर्याल कोरोना विश्व महामारी भएकाले खोप बनिसकेपछि नेपालमा समेत उपलब्ध हुन खासै ढिलाइ देख्दैनन् । अहिले खोप उत्पादनमा होडबाजी देखिए पनि बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशले आफ्ना वैज्ञानिक सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा मात्र खरिद गर्ने उनी बताउँछन् । ‘सुरुमा जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी र युवालाई खोप दिने गरी प्राथमिकता छुट्ट्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ १३:००